Ra’iisulwasaare Cabdiweli oo booqasho ku tagay Dhadhaab | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Ra’iisulwasaare Cabdiweli oo booqasho ku tagay Dhadhaab
Ra’iisulwasaare Cabdiweli oo booqasho ku tagay Dhadhaab
Ra’iisulwasaaraha dawladda Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wefdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa booqasho taariikhi ah markii ugu horreysay ku tagay xeryaha qaxootiga Dhadhaab oo ay ku nool yihiin kummannaan qaxooti Soomaali ah oo kasoo cararay colaadaha.
Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wefdigiisa oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, qunsulka Soomaaliya u fadhiya Kenya, xildhibaano ka tirsan barlamaanka, guddoomiyaha arrimaha qaxootiga ee Kenya, saraakiil ka socotay hey’adda UNHCR iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa booqashadaasi ku soo kala bixiyey xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada xeryaha qaxootiga qaarkood ee Dhadhaab.
Intii lagu guda jiray booqashada ayuu ra’iisulwasaaruhu la kulmay guddiyo ay iska soo xuleen masuuliyiinta xeryaha qaxootiga isaga oo warbixino ka dhageystay dhinaca kalena u xaqiijiyey in xukuumaddiisu aysan marnaba doonayn in qaxootiga si khasab ah loogu celiyo Soomaaliya.
Sidoo kale, mar uu la hadlayay warbaahinta Cabdiweli wuxuu sheegay in qaxootiga uu ku soo arkay Dhadhaab ay yihiin kuwa si weyn u doonaya inay dib ugu noqdaan waddankoodii, sidaasi awgeed ay dawladdu mudnaanta siinayso arrimaha qaxootiga Soomaaliya.
Waa markii ugu horreysay oo masuul ka socda dawladda Soomaaliya uu booqasho ku tago xeryaha qaxootiga ee Kenya muddo ku dhow 25 sanno.
Previous articleAfrika oo afjareysa arrimaha Soomaaliya
Next articleMuqdisho oo laga cabanayo canshuuro lasoo rogay